मिचाहा मेडिकल कलेज, निरीह चिकित्सा आयोगः पढाइ छाडेर किन आन्दोलनमा छन् एमबिबिएसका विद्यार्थी?
2022-01-10 20:13:58 | २६ पुष २०७८
काठमाडौँः काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) मा एमबिबिएस अध्ययनरत ललितपुरका आकाश शर्मा (नाम परिवर्तन) अहिले सडक आन्दोलनमा छन्। पहिलो वर्षको शुल्क बुझाएर अध्ययनरत उनी जस्तै कयौँ विद्यार्थी अहिले कलेजविरुद्ध आन्दोलनमा छन्। कारण -कलेजले अतिरिक्त शुल्क भन्दै बढाएको रकम। आकाश कलेजले अस्वाभाविक रूपमा शुल्क बढाएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्न खोजिरहेको बताउँछन्। कलेजकै कारण विद्यार्थीहरु मानसिक तनावमा रहेको उनी बताउँछन्। 'मानसिक रूपमा निकै…
‘ओमोक्रन भेरियन्ट’ले बलिउड तर्सिएपछि फेरि अन्यौलमा नेपाली फिल्म क्षेत्र
2022-01-06 07:14:45 | २२ पुष २०७८
काठमाडौं : अक्षयकुमार अभिनित बलिउड फिल्म 'सूर्यवंशी' ले नेपाली सिनेमाहलमा कोरोनाअघिकै पुरानै माहोल फर्काउन सफल भएको थियो। यो फिल्मले फर्काएको दर्शक देखेर नेपाली निर्माताहरु पनि रिलिज डेट तोक्न कस्सिए। जसकारण 'चपली हाइट ३, लप्पन छप्पन २, प्रेमगीत ३, म यस्तो गीत गाउँछु -२, सम्हालिन्छ कहिले मन' लगायत होल्डमा रहेका ठुला बजेटका फिल्महरुको रिलिज मिति तय भए। त्यसपछि हलिउड फिल्म 'स्पाइडर…
'कठपुलती'ले हलसम्म तान्ला त दर्शक?, नेपालमा हरर फिल्मको बजार कस्तो छ?
2021-12-30 10:38:58 | १५ पुष २०७८
काठमाडौं : फिल्म 'कठपुतली' पुस १६ गतेदेखि नेपालभर प्रदर्शनमा आउँदैछ। हरर जनरामा बनेको 'कठपुतली' को बुधवार ग्रान्ड प्रिमियर गरिएको थियो। कमलपोखरी स्थित बिग मुभिजमा भएको ग्रान्ड प्रिमियरपछि दर्शकहरुको प्रतिक्रियाले फिल्म युनिट हौसिएको छ। विदेशी हरर फिल्मलाई दर्शकहरुले धेरै रुचाएका छन्। तर नेपाली फिल्म उद्योगमा हरर जनराको फिल्म खासै सफल देखिएको छैन। जति पनि हरर फिल्महरु बने ती मध्य कुनै पनि फिल्मले व्यवसायिक सफलता…
दुई विदेशी फिल्मले ततायो नेपाली बक्सअफिस, 'स्पाइडरम्यान' ले गर्‍यो ३ करोडको व्यापार र 'पुष्पा' ले कमायो डेढ करोड
2021-12-22 07:25:04 | ७ पुष २०७८
काठमाडौं: गत शुक्रवार देखि प्रदर्शनमा आएका दुई विदेशी फिल्महरुले नेपालमा आक्रामक व्यापार गरिरहेका छन्। हलिउड सुपर हिरो फिल्म ‘स्पाइडर म्यानः नो वे होम’ले बक्स अफिसमा आकर्षक कलेक्सन गरिरहेको छ। त्यसैगरी अल्लु अर्जुन र रश्मिका मन्दना अभिनित तेलुग फिल्म 'पुष्पा- द राइज' ले पनि नेपाली सिनेमाहलमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ। यसअघि रिलिज भएको अक्षयकुमार अभिनित बलिउड फिल्म 'सूर्यवंशी' ले कोरोनाअघिको पुरानै…
2021-11-29 07:54:11 | १३ मंसिर २०७८
धेरै जनावरहरुको एउटै झुन्ड। त्यो झुन्डको नेतृत्व चाहिँ बुढो मेजर अर्थात् सुङ्गुरले गरिरहेको। विद्रोहका लागि तयार झुन्डमा सुँगुरदेखि घोडा, भेडा, काग, गधा, गाई, हाँस, मुसा र कुखुराहरु। सबै भेला भएको दिन पारेर मेजरले प्रश्न गर्छ, 'एउटा जनावरको जीवन प्राय दु:ख र गुलामीमै बित्छ। के यो प्रकृतिको आदेश हो?' मेजरले फेरि थप्छ, 'प्रकृतिले कहिले भेदभाव गदैन। त्यसो भए हामी किन यो…
2021-11-20 07:16:20 | ४ मंसिर २०७८
काठमाडौं : कुनै समय काठमाडौंको धोबीचौरमा ठूलो चौर थियो। सँगै थिए थुप्रै ढुंगेधाराहरु। विभिन्न आकृतिसहितको ती ढुंगेधाराले त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको प्यासमात्रै मेटाउँदैन थियो। लामो समयदेखि त्यहीँ धोबी पेशामा संलग्न हुँदै आएको समुदायको जिविकोपार्जनको माध्यमसमेत थियो ती ढुंगेधाराहरु। समयक्रमसँगै चौर वरिपरि थुप्रै घर बने। काठमाडौंमा शहरीकरण बढेसँगै ढुंगेधाराहरु मासिए। धोबीचौरमा रहेका ढुंगेधारा पनि शहरीकरणको सिकार बने। कति हराए। कति…
बलिउड फिल्म ‘सूर्यवंशी’ले नेपाली सिनेमाहलमा फर्कायो रौनक, हल सञ्चालक दंग
2021-11-09 19:05:24 | २३ कात्तिक २०७८
काठमाडौं : अहिले नेपाली सिनेमा हलमा दर्शकहरुको खचाखच भिड छ। टिकट पाउन समेत गाह्रो छ। माहोल बनाएको हो रोहित सेट्टी निर्देशित बलिउड फिल्म ‘सूर्यवंशी’ले। अक्षय कुमारको मुख्य भूमिका रहेको यस फिल्ममा कैटरिना कैफ, अजय देवगन र रणवीर सिंह लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ। देशभरिका सिनेमा हलमा रिलिज भएको फिल्म ‘सूर्यवंशी’ले कोरोना महामारीअघिको रौनक फर्काइदिएको छ। चावहिलमा रहेको एफ क्युबमा फिल्म हेर्न…
दशकको अथक प्रयासपछि शिरमा 'मिस युनिभर्स नेपाल'को ताज : यस्तो छ मेरिल्यान्डमा जन्मेकी सुजिताको संघर्षको कथा
2021-11-09 07:00:03 | २३ कात्तिक २०७८
'मिस युनिभर्स नेपाल २०२१' को फिनालेमा विजेता घोषित हुनुअघि। दुई जना प्रतिस्पर्धी थिए बाँकी। एक निनाकान्त मण्डल, अर्को सुजिता बस्नेत। दुबै परिचित प्रतिस्पर्धी। किनकि दुबै जना गत वर्ष नै यो ताजका लागि आमनेसामने भएका थिए। जसले सुजिताको धड्कन तेज बनाइरहेको थियो - कतै निनाकान्तले पहिरिने त हैन? परिणाम जेसुकै होस् - निनाकान्तको हालत पनि त्यस्तै थियो। त्यसैले होला रक्षा उप्रेती…
राति देउसी भैलो खेल्न नपाइने निर्णयप्रति कलाकारको आपत्ति, प्रशासन भन्छ : निर्णय एकदम ठिक छ
2021-11-03 19:50:18 | १७ कात्तिक २०७८
काठमाडौं : तिहारमा राति ९ बजेपछि देउसी-भैलो खेल्न नपाइने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। कलाकारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयको विरोध गरेका हुन्। संगीतकार शम्भुजित बास्कोटा देउसी भैलोमा समय तोक्न नहुने बताउँछन्। प्रशासनको निर्णयप्रति बास्कोटा सन्तुष्ट छैनन्। ‘सबै क्षेत्र खुलिसकेका छन्। दिउँसो बजारमा त्यस्तै भीड छ। राति क्लबहरूमा पनि। कोरोनाकै कारण देखाएर यसरी राति देउसी भैलो खेल्न…
'साथी' मा कुकुरलाई कसरी दिइयो मुख्य भूमिका?
2021-11-03 07:09:48 | १७ कात्तिक २०७८
'अर्जुन, बाबुलाई बचा!' 'अर्जुन छिटो गर, बाबुलाई छिटो लिएर आइजा…' ठूलो नदीमा बगिरहेको सानो बच्चातिर कुकुर दौडिरहेको हुन्छ। ती बच्चा जसलाई उनकै बुवा र सौतेनी आमाले खोलामा फालेका थिए। तिनै बच्चालाई बचाउन बसुन्धरा भुषालले कुकुरसँग गरेको अनुनय हो माथिको संवाद। बच्चालाई खोलामा फालेको देख्ने बित्तिकै बसुन्धराको भरोसा हुन्छ - कुकुर। आत्तिएकी उनी कुकुरसँगै दौडिएर नदीमा पुग्छिन्। अनि बाकसलाई तान्दै खोला…
तिहार नजिकिएसँगै युट्युबमा छाए ‘देउसी भैलो’ गीत, कस्ता छन् तिहार विशेष नयाँ गीतहरु?
2021-10-31 20:01:09 | १४ कात्तिक २०७८
काठमाडौं : हिन्दुहरुको महान चाड तिहार नजिकिँदै छ। दशैँपछि नै तिहारविशेष गीतहरु आउने क्रम बढ्दो छ। तिहारलाई लक्षित गर्दै देउसी भैलोसँग सम्बन्धित नयाँ-नयाँ गीत सार्वजनिक भइरहेका छन्। तिहारकै अवसरमा दुई साताअघि पशुपति शर्माको ‘देउसी भैलो’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। गीतमा युवादेखि बच्चासम्म देउसी भैलो खेलेर आफ्नो परम्परा जोगाउनुपर्छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ। जसकारण पनि गीतलाई युट्युबमा रुचाइएको छ। दुर्गा…
अस्मिता गौतम : जसको आवाज बनेको छ धेरैको साथी तर आफैंलाई लाग्छ आफ्नो कविता ‘सिल्ली’
2021-10-23 09:00:04 | ६ कात्तिक २०७८
साँझपख अस्मिता गौतम (बरी) को समय घरको छतमै बित्थ्यो। छतमा गएर निलो आकाश हेर्नु उनको दैनिकी। आकाश हेर्दै कहिले गुन्गुनाउने त कहिले टोल्याउने। एकदिन त्यही आकाशलाई हेर्दैँ कल्पन थालिन् अस्मिता। रंग बदलिरहेको आकाशसँगै उनले कविता कोर्न थालिन्: तिमी र म यो आकाश जस्तै भइसक्यौ हेर्दा एकअर्कालाई देख्छौँ तर थाहा छैन कति टाढा … +++ विद्यालयमा छँदा अस्मिताको नेपाली अक्षर राम्रो…
2021-10-19 07:00:13 | २ कात्तिक २०७८
काठमाडौं : चाडपर्वको माहोलबिच दसैंकै समयमा रिलिज भयो 'कालो केशमा रेलीमई।' युट्युबमा रिलिज भएको दुईदिन गीतको प्रदर्शन सुस्त रह्यो। नयाँ गायक। भिडियोमा पनि नयाँ अनुहार। धेरैको नजर परेन गीतमा। दसैंको चहलपहलबिच गीत हराउने त होइन भन्ने लाग्यो गायक दिनेश ढकाललाई। तर, गीत रिलिज भएको तेस्रो दिनदेखि उनको अपेक्षाभन्दा फरक 'रेस्पोन्स' आयो युट्युबमा। कारण : 'कालो केशमा रेलीमई बाँधेको रिबन, तिमीलाई…
दसैँ लाग्दा देशैभरका स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त हुन थाले नेपाली कलाकार
2021-10-12 17:39:57 | २६ असोज २०७८
काठमाडौं : कोरोनाको दोस्रो लहरपछिको निषेधाज्ञा हटेसँगै अहिले चहलपहल बढ्दो छ। हरेक क्षेत्रले आफ्नो गति समातिरहेको देख्न सकिन्छ। डेढ वर्षको कोरोना महामारीपछि कलाकारहरु पनि अहिले व्यस्त हुन थालेका छन्। स्टेजमा व्यस्त हुने नेपाली कलाकारहरु दसैँ लाग्दा देशैभरका स्टेज कार्यक्रममा प्रस्तुती दिन थालेका छन्। गायक प्रकाश सपुतले स्टेज कार्यक्रममा जान पाउँदा निकै खुसी लागेको फेसबुकमा उल्लेख गरेका थिए। उनले पागलपन स्टेजमा…
प्रमोद निर्वाणको त्यो गीत जसले दसैंमा बोल्छ गरिबीको वेदना
2021-10-10 06:31:43 | २४ असोज २०७८
दसैं आयो भन्दा भन्दै, दशा ल्यायो दसैं आयो भन्दा भन्दै, दशा ल्यायो सररर रोटेपिङैमा अझै छन् बरिलै साहुको ऋणमा दसैंको माहोल छ। दसैं आउँदा हुने खानेहरु रमाइलो गरिरहेका हुन्छन्। तर गरिब परिवारलाई भने एक छाक टार्नसमेत गाह्रो हुन्छ। बाढिपहिरोले खेतिपाती नष्ट गर्दाको पीडा। जसमाथि थपिने साहुको ऋण। जसकारण त्यो गरिब परिवारको सदस्यले दसैंलाई दशा भनि सोच्छ। दसैं आउँदा उसलाई झन…
दसैं तिहार लक्षित यस्ता छन् नयाँ गीतहरु
2021-10-08 08:00:39 | २२ असोज २०७८
काठमाडौं : दसैं सुरु भइसकेको छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण केही प्रभावित भएको दसैंको जमघट यसपटक भने फेरि पुरानै लयमा फर्किँदैछ। सँगै दसैं तिहार लक्षित नयाँ गीतहरु समेत सार्वजनिक भए छन्। असोज ६ गते सपना म्युजिक इन्डष्ट्रिजमार्फत दसैंतिहार विशेष गीत सार्वजनिक भएको छ। गीतको बोल हो ‘दसैं तिहार आइसक्यो’। विष्णु माझीकै श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द र संगीत रहेको गीतमा विष्णुको…
2021-10-07 18:22:10 | २१ असोज २०७८
काठमाडौं : घटस्थापनाको दिनदेखि देशैभरिका सिनेमा हलहरू खुलिसकेका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरको निषेधाज्ञापछि बन्द भएका सिनेमा हल पुन: खुलेका हुन्। हल खुलेको पहिलो दिन हलिउड फिल्म ‘फास्ट एण्ड फ्युरियस ९’ र ‘नोबडी’ रिलिज भएका छन्। चावहिलमा रहेको एफ क्युब सिनेमामा पहिलो दिनमै फिल्मका पाँच ओटा शोहरु प्रदर्शन भए। हल खोलेको पहिलो दिन नै सोचेको भन्दा राम्रै दर्शक आएको एफ क्युब…
'किन यसरी'को रिमेकसँगै प्रमोद निर्वाणको 'कमब्याक लुक्स' यस्तो, हराए भन्नेलाई खोज्न आग्रह
2021-09-28 09:15:27 | १२ असोज २०७८
करिब २५ वर्षअघि तिरको कुरा हो - नेपालको संगीत क्षेत्रमा म्युजिक ब्यान्डको लहर नै चलेको थियो। ब्यान्डमा नविन के भट्टराई, सुनिल बर्देवा, हरिस माथेमा, सुनिल उप्रेती, भिम तुलाधरहरुको दबदबा नै थियो। उनीहरुबाट नै प्रेरित भएर २०५५ सालमा प्रमोद निर्वाणले साथीसँग मिलेर एक ब्याण्ड बनाए। ब्याण्डको नाम राखियो - निर्वाण एन्ड म्युजिक लिंक। टिममा थिए ६ जना। ब्यास गितारिस्टमा अभिनाश गिरी,…
‘स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क गर सरकार’ भन्दै आम युवा समूहले गरे विरोध प्रदर्शन
2021-09-25 20:47:51 | ९ असोज २०७८
काठमाडौं : महिनावारी हुँदा महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा सरकारले कर लगाएको भनेर अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यो चर्चा र वहसको विषय बन्न पुगेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले भने हिजो मात्रै प्याडको मुल्य नबढाएको भन्ने जवाफ दिइसकेको छ। यसैबीच, युवाको समुह ‘आम युवा समुह’ले आज शनिवार काठमाडौंको रत्नपार्कमा स्यानिटरी प्याड वितरण गरेर साङ्केतिक विरोध गरेको छ।…
को महानायक को महानायिका ? कलाकारलाई उपाधि नै चाहिन्छ त ?
2021-09-21 11:33:52 | ५ असोज २०७८
काठमाडौं : नेपाली फिल्म उद्योगमा नायक नायिकाहरुलाई दिइने उपाधिबारे बेला बेला चर्चा चल्ने गर्छ। कलाकारहरुलाई 'महानायक, महानायिका, मेघास्टार, एक्सन किंङ' जस्ता उपमा दिइन्छ। विभिन्न संस्थाले अभिनेता राजेश हमाललाई महानायक र करिश्मा मानन्धरलाई महानायिकाको उपाधि दिइसकेका छन्। कसैले भने राजेश र करिश्मालाई नभइ भुवन केसी र गौरी मल्ललाई त्यो उपाधि दिन्छन्। तर, के उनीहरु साँच्चै महानायक र महानायिका हुन् त भन्ने प्रश्न…